के तपाइँले बजारमा खाना पकाउने ग्यास सम्बन्धित डिपोबाट सहजै प्राप्त गर्न सक्नुभएको छैन ? - हिमाल दैनिक
काठमाडौँ ३ मंसिर २०७६, मंगलवार ००:००
के तपाइँले बजारमा खाना पकाउने ग्यास सम्बन्धित डिपोबाट सहजै प्राप्त गर्न सक्नुभएको छैन ? कुन कम्पनीको ग्यास कुन डिपोबाट उपलब्ध हुन नसकेको हो ? त्यसका बारेमा अब नेपाल आयल निगमलाई जानकारी गराउनुहोस्, निगमले डिपो र कम्पनी दुवैलाई कानूनी कारवाही गरी इजाजतसमेत खारेज गर्न सक्छ ।
अघिल्लोत्रिपाठीसहित ६ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्रीले लिए पद तथा गोपनीयताको सपथ
पछिल्लोनेतादेखि कार्यकर्तासम्मलाई एकताबद्ध पार्दै भिडेकाछन् कांग्रेस उम्मेदवार खेमराज पौडेल